« Valeur refuge, harena tsy mety mihena sanda ny volamena ka tena zava-dehibe ho an’i Madagasikara ny fanapahan-kevitry ny Filoham-pirenena hametraka ny Tahirim-bolamena Nasionaly », hoy ny Minisitra RAKOTOMALALA Olivier raha nitondra fanazavana nandritra ny fandaharana Lazao ny Marina ny Zoma 03 Jona 2022 tao amin’ny Televiziona Malagasy – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
« Valeur refuge, harena tsy mety mihena sanda ny volamena ka tena zava-dehibe ho an’i Madagasikara ny fanapahan-kevitry ny Filoham-pirenena hametraka ny Tahirim-bolamena Nasionaly », hoy ny Minisitra RAKOTOMALALA Olivier raha nitondra fanazavana nandritra ny fandaharana Lazao ny Marina ny Zoma 03 Jona 2022 tao amin’ny Televiziona Malagasy
08/06/2022 09/06/2022 SMLN
Indreto misy fanampim-panazavana sy fintina an-tsary avy amin’ireo lahatsoratra an-gazety momba izany :
Miara-miasa ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny Banky Foiben’i Madagasikara amin’ny fanatontosana ny Tahirim-bolamenam-pirenena (Free News, 07/06/2022)
Mba hahatrarana ny tanjona amin’ny fananana Tahirim-bolamena azo ampiasaina araka izany, dia ilaina fampiakarana ny taham-pahadiovan’ireo volamena mba hahatratra 99,99%. Mila mahazo ny kalitao or monétaire sady mahafeno ireo fepetra rehetra takian’ny fenitra iraisam-pirenena London Bullion Market Association na ny LBMA ireo volamena ireo.
Tsy ny orinasa rehetra no afaka manadio na manao »affinage » ho an’ny volamena ampidirina ao anaty Tahirim-bolamena anaty Banky Foibe maneran-tany fa ireo izay mahafeno fepetra ka eken’ny LBMA. Tsy mbola misy orinasa toy izany eto Madagasikara (Malaza, 07/06/2022)
Hampiasa ireo volamena voatahiry ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara ny fitondram-panjakana. Orinasa iray any Soisa no efa naneho fahavononana hiara-hiasa amin’ny fanodinana ireto volamena ireto mba ho azo ampiasaina eo amin’ny fanohanana ny Tahirim-bola vahiny sy ny sandam-bola malagasy (Gazetiko,07/06/2022)
Halefa any Soisa ireo volamena rehefa feno ny fepetra sy fifanarahana mazava, ary haverina aty Madagasikara indray avy eo. Tsy haharitra ela ny fanadiovan’ilay orinasa azy satria mahavita manadio volamena aman-taonina maro isanandro ny orinasa hisahana izany. (TARATRA,07/06/2022)
Ity ny rohy ahafahanao manaraka ny fanazavana nentin’Andriamatoa Minisitry ny harena an-kibon’ny tany RAKOTOMALALA Olivier mikasika izany
← AKOM-BAOVAO DRMRS MENABE: FAMPAHAFANTARANA SY FANENTANANA IFOTONY TANY MALAIMBADY
AKOM-BAOVAO DRMRS TOAMASINA : Fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana momba ny fanaraha-maso ny fitaterana ny vokatry ny harena an-kibon’ny tany →